Horudhac | lerni
Guriga › Horudhac
Qaybta PDF ee boggan (6kb)
Toddobaadka Adult Learners’ Week wuxuu u dammaashaadayaa nimcada fursadaha waxbarasho ee dadka waaweyn oo laga helo Australia.
Waxbarashada bulshadu waxay u furan tahay dadka da’ kasta iyo asalka waxbarasho ah. Sannad kasta boqolaal kun oo Ausralian ah ayaa xirfadaha shaqo, beeraha, ganacsiga, kombiyuutarka, iyo farshaxanka, muusigga, caafimaadka, wax-karinta iyo luqadaha ka barta bixiyeyaasha waxbarashada bulshada.
Waxbarashada bulshada waa mid la awoodo waxaana lagu bixiyaa meelo soo-dhaweyn leh, oo ay ka mid yihiin koleejooyinka bulshada, neighbourhood houses, maktabadaha iyo TAFE-ka. Qaar ka mid ah migrant resources centres ayaa bixiya barnaamijyo waxbarasho, waxay kaloo kaa caawin karaan inaad hesho koorso si ay u kaafido baahiyahaaga. Waxaad ka mid noqon kartaa koox nashaadeed aan rasmi ahayn, workshop hal-maalin ah, ama koorso soconaysa dhowr toddobaad ama bilood.
Waxbarashada bulshada aan la qiimayn (koorsooyinka aan laga qaadan shahaadooyinka rasmiga ah) waxay noqon karaan sida ugu qiimaha badan oo laysugu diyaariyo waxbarasho dheeraad ah, shaqo-helid, ama mihnad baddelid. Koorso gaaban ayaa kaa caawin karta inaad hesho xirfadaha taknikada ama aqooneed, inaad sahmiso xiisaha shaqsiyadeed, inaad horumariso xirfadahaaga wada-hadal, iyo inaad la kulanto dadka bulshadaada ka tirsan. Waxaad aad la socon doontaa nidaamka waxbarasho ee Australia waxaadna kor-u-qaadi kartaa isku kalsoonida inaad sii raadsato fursadaha shaqada iyo waxbarashada.
Nasiib wacan safarkaaga waxbarashada noloshaada!